Market update(Market update) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
बजार खुलेको सवा २ घन्टामै रु. ६ अर्बको कारोबार, नेप्से २९०० को विन्दु माथि
काठमाण्डौ । धितोपत्र कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आइतबार सेयर बजारमा उछाल आएको छ। यो समाचार तयार पार्दा (१ः१५ बजे) सम्म सेयर कारोबार पनि झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा भएको छ भने नेप्से परिसूचक २९०० को विन्दु माथि पुगेको छ। अहिले बजार ७३.४ अंकले बढेर २९३१.१४ को विन्दुमा उक्लिएको छ। राम्रा र बलिया कम्पनीको सूचक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि...
बजार साढे २ घन्टामै ६%ले बढ्यो, पोजिटिभ सर्किटसँगै आजका लागि कारोबार स्थगित
काठमाण्डौ । लगातार घटिरहेको सेयर बजारमा आज मंगलबार उछाल आएको छ। बजार खुलेको साढे २ घन्टा नहुँदै ६ प्रतिशतले बढेपछि आजका लागि कारोबार स्थगित भएको छ। सेयर बजार खुलेको पहिलो घन्टामा ४ प्रतिशत घटेमा वा बढेमा २० मिनेटका लागि कारोबार स्थगित गरिन्छ। यसैगरी दोस्रो घन्टामा ५ प्रतिशत बजार घटबढ गरेमा ४० मिनेटका लागि कारोबार स्थगित गरिन्छ भने...
सेयर बजारमा लाग्यो पोजिटिभ सर्किट ब्रेक, ४० मिनेटका लागि कारोबार स्थगित
काठमाण्डौ । लगातार घटिरहेको सेयर बजारमा पुनः हरियाली छाएको छ। बजार उछाल आउनुका साथै कारोबारको दोस्रो घन्टामा ५ प्रतिशतले बढेसँगै पोजिटिभ सर्किट ब्रेक लागेको छ। योसँगै कारोबार ४० मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ। सेयर बजार खुलेको पहिलो घन्टामा ४ प्रतिशत घटेमा वा बढेमा २० मिनेटका लागि कारोबार स्थगित गरिन्छ। यसैगरी दोस्रो घन्टामा ५...
सेयर बजारमा हरियाली, डेढ घन्टामै १०० अंकको उछाल
काठमाण्डौ । लामो समयदेखि घटिरहेको सेयर बजारमा आज खुलेको डेढ घन्टामै १०० अंकले उकालो लागेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म नेप्से परिसूचक १००.०६ अंकले उकालो लागेको छ। योसँगै नेप्से परिसूचक २३८१.७३ को विन्दुमा उक्लिएको छ। राम्रा र बलिया कम्पनीको सूचक पनि १६.४५ अंकले बढेर ४५४.०४ को विन्दुमा पुगेको छ। कारोबार १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बढीको...
ब्याजदरको कालोछायाँले बजारमा पहिरो, नेप्से २५०० को लाइनमा
काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदरमा भारि वृद्धि गरेपछि त्यसको नकारात्मक प्रभावले बजार उच्च अंकले घटेको छ । कारोबार खुलेको पहिलो २ घण्टा नबित्दै सेयर बजार मापक नेप्से इण्डेक्स ६२.५० अंकले घटेर २५९४ अंकमा आइपुगेको छ । बजारमा गिरावट जारी रहेको र यो क्रम निरन्तर रहे आज बजार बन्द हुँदासम्म बजार अझै उच्च अंकले घट्नसक्ने...
मार्केट अपडेट : सेयर बजारमा उछाल, १०० अंकले बढ्यो नेप्से
काठमाण्डौ । आज सेयर बजारमा उछाल आएको छ। लगातार घटिरहेको बजार हिजोबाट उकालो लाग्न थालेको हो। आज यो समाचार तयार पार्दा (१ः०९ बजे) सम्म बजार १००.५ अंकभन्दा बढीले उकालो लागेको छ। नेप्से परिसूचक २८१२.१२ को विन्दुमा उक्लिएको छ। राम्रा र बलिया कम्पनीको सूचक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि १९.३९ अंकले बढेर ५२८.०२ को विन्दुमा पुगेको छ। यतिबेलासम्म सवा ३...
मार्केट अपडेट : साढे २ घन्टामै १०० अंक बढीले घट्यो बजार
काठमाण्डौ । सेयर बजार बुधबार कारोबार खुलेको साढे २ घन्टामै १०० अंक बढीले ओरालो लागेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म दिउँसो १ः२३ बजेसम्म बजार १०९.१३ अंकले ओरालो लागेको छ। योसँगै नेप्से परिसूचक २७०३.१३ को विन्दुमा झरेको छ। राम्रा र बलिया कम्पनीको सूचक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि १९.०२ अंकले घटेर ५०६.७६ को विन्दुमा झरेको छ। अहिले कारोबारमा...
मार्केट अपडेट : नेप्सेमा ७९.४९ अंकको गिरावट, २ कम्पनीको मात्र सेयरभाउ बढ्यो
काठमाण्डौ । कारोबार खुलेको २ घन्टामा सेयर बजार झन्डै ८० अंकले ओरालो लागेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म बजार ७९.४९ अंकले ओरालो लागेको छ। नेप्से परिसूचक २८०९.५५ को विन्दुमा झरेको छ। अधिकांश वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकले मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन्। जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेयर बजारमा परेको हो। राम्रा र बलिया कम्पनीको सूचक...
ब्याजदरको प्रभाव : एक घन्टामै सेयर बजार ६४.९१ अंकले घट्यो
काठमाण्डौ । सेयर बजारमा आज ब्याजदरको नकारात्मक प्रभाव परेको देखिएको छ। अधिकांश वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकले मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन्। जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेयर बजारमा परेको हो। सेयर बजार र बैंक ब्याजदर ठिक उल्टो सम्बन्ध रहेको हुन्छ। बैंकको ब्याजदर घट्दा सेयर बजार बढ्छ भने बैंकको ब्याजदर बढ्दा सेयर बजार घट्छ। आज...
मार्केट अपडेट : नेप्से ३२०० माथि, सवा १३ अर्ब बढीको कारोबार
काठमाण्डौ । आज बुधबार कारोबार खुलेको साढे २ घन्टामा सेयर बजार ३२०० विन्दुभन्दा माथि उक्लेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म बजार ४१.५२ अंकले बढेको छ। योसँगै नेप्से परिसूचक ३२०१.८४ को विन्दुमा उक्लिएको छ। यो नेप्सेले चुमेको हालसम्मकै उच्च विन्दु हो। यसअघि गत साउन ३० गते नेप्सेले हालसम्मकै उच्च विन्दु ३१७८.९१ को उचाइ चुमेको थिय�...
मार्केट अपडेट : बजारमा तीव्र उतारचढाव, व्यापार समूहमा चमक
काठमाण्डौ । धितोपत्र कारोबार साताको दोस्रो दिन सोमबार पनि बजारमा निकै उतारचढाव देखिएको छ। सुरुआती चरणदेखि बजारमा उतारचढाव देखिएको हो। बजार खुलेको ३ घन्टामा नेप्से परिसूचक ८.५७ अंकले बढेको छ। यसअघि बजार खुलेको २ घन्टामा बजार ३३.४८ अंकले उकालो लागेको छ भने सुरुआती चरणमा ५० अंकसम्मले बजार बढेको थियो। यो समाचार तयार पार्दासम्म नेप्से...
मार्केट अपडेट : २ घन्टामा पौने ७ अर्बको कारोबार, ३३.४८ अंकले बढ्यो बजार
काठमाण्डौ । धितोपत्र कारोबार साताको दोस्रो दिन सोमबार पनि बजारको उकालो यात्रा जारी नै रहेको छ। बजार खुलेको २ घन्टामा नेप्से परिसूचक ३३.४८ अंकले उकालो लागेको छ। योसँगै नेप्से ३०१४.०९ को विन्दुमा उक्लिएको छ। राम्रा र बलिया कम्पनीको सूचक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ४.४५ अंकले बढेर ५६५.४१ को उचाइमा पुगेको छ। यो बेलासम्म पौन ७ अर्ब रुपैयाँ...
सेयर बजारमा चमक कायमै, १ घन्टामै २७.६० अंकले बढ्यो नेप्से, रु. ४ अर्ब बढीको कारोबार
काठमाण्डौ । धितोपत्र कारोबार साताको दोस्रो दिन सोमबार बजारमा चमक देखिएको छ। बजार खुलेको सुरुआती चरणमै ५० अंकको हाराहारीमा बढेको नेप्से परिसूचक अहिले १ घन्टाको अवधिमा भने २७.६० अंकले उकालो लागेको छ। योसँगै नेप्से ३००८.२१ को विन्दुमा उक्लिएको छ। राम्रा र बलिया कम्पनीको सूचक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ३.८२ अंकले बढेर ५६४.७८ को उचाइमा पुगेको...
मार्केट अपडेट : फेरि उकालो लाग्यो बजार, ३ घन्टामै साढे १२ अर्बको हाराहारीमा कारोबार
काठमाण्डौ । निकै उतारचढावबीच आज मंगलबार बजार खुलेको तेस्रो घन्टामा फेरि लयमा फर्केको छ। बजार खुलेको पहिलो एक घन्टामा उकालो लागेको बजार दोस्रो घन्टामा ओरालो लागेको थियो। तर, तेस्रो घन्टासम्म बजार पुनः लयमा फर्केको हो। यो समाचार तयार पार्दासम्म नेप्से परिसूचक १०.९७ अंकले उकालो लागेको छ। अहिले नेप्से ३०३६.७९ को विन्दुमा उक्लिएको छ।...